June 28, 2021 1122
कुवेतले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडर्ना र जोनसन एन्ड जोनसनको खो`पलाई मात्रै अनुमति दिएको छ। साउदी अरबले पनि एयरलाइन्स कम्पनी`हरूलाई खोप नलगाएका यात्रुलाई नबोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। साउदी प्रवेश गर्ने यात्रुले बोर्डिङ पास लिने बेला खो`प लगाएको प्रमाण|पत्रसमेत नियम छ। – ताजा खबर
Prevकसिलो लुगा लगाउनुहुन्छ ? होशियार हुनुहोस्: निम्तिन सक्छ यस्तो खतर`नाक रोग
Nextहवाई उडान खुलेसँगै भाडापनि परिवर्तन, कहाँको कति बढ्यो हवाई भाडा ? हेर्नु`होस्
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्दै एउटा फोटो फेसबुकमा भाइरल बनाइयो, खास कुरा यस्तो रहेछ